ग्लोबल आईएमई बैंकका लगानीकर्ताहरुलाई १६ प्रतिशत बोनस शेयर | गृहपृष्ठ
Home लगानी ग्लोबल आईएमई बैंकका लगानीकर्ताहरुलाई १६ प्रतिशत बोनस शेयर
on: January 11, 2019 लगानी
ग्लोबल आईएमई बैंकका लगानीकर्ताहरुलाई १६ प्रतिशत बोनस शेयर
पुस २७, काठमाडौं (अस) । ग्लोबल आइएमई बैंकका लगानीकर्ताहरुले १६ प्रतिशत बोनस शेयर पाउने भएका छन् । शुक्रवार राजधानीमा आयोजना भएको यस बैंकको १२औं वार्षिक साधारण सभाले यो निर्णय गरेको हो । बैंकका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालको सभापतित्वमा आयोजना भएको उक्त सभाले बोनस शेयर वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गरेर बैंकको चुक्तापूँजी वृद्धि गर्ने प्रस्ताव पनि स्वीकृत गरेको छ ।
हाल बैंकको चुक्तापूँजी रू. ८ अर्ब ८८ करोड रहेको छ । लगानीकर्ताहरुलाई बोनस शेयर वितरण गरे पश्चात बैंकको चुक्तापूँजी रू. १० अर्ब ३१ करोड पुग्नेछ । यस बैंकको पहिलो त्रैमासिक वित्तीय विवरण अनुसार जगेडा कोष रू. ५ अर्ब ७३ करोड पुगेको छ । साथै, बैंकले रू. ५३ करोड ५८ लाख नाफा कमाएको छ भने वितरण योग्य नाफा रू. ५१ करोड ७६ लाख पुगेको छ । सोहि अवधिमा बैंकले रू. १ खर्ब ११ अर्ब निक्षेप संकलन गरेको थियो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार सातै ओटा प्रदेशमा बैंकको प्रदेश कार्यालय स्थापना भएको र सो कार्यले ग्राहक तथा शाखाहरुलाई समेत सहयोग पुगेको बैंकले जानकारी दिएको छ । साथै, बैंकको आफ्नो व्यापार तथा पहिचानलाई अन्तराष्ट्रिय स्तरमा पु¥याउने उद्देश्य रहको छ ।
ग्लोबल आइएमईले बोनस जम्मा गर्न माग्यो करको रकम
हाथवे फाइनान्सको साधारण सभा मंगलवार
ईपिएस र ग्लोबल आइएमईबिच सम्झौता
ग्लोबल आईएमई बैंकमा आगलागी, क्षतिको विवरण आउन बाँकी